Apparent power limit - 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: apparent power limit at the time of occurrence (英語 - ビルマ語)
At the time of writing, no effective antiviral therapy has been confirmed.
ယခုအချိန်အထိ ထိရောက်သော ပိုးသတ်ဆေးကုထုံးကို အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ထိုသို့နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့သည့်အချိန်တွင်၊ လူအများအပေါင်းတို့သည် ပြင်၌ဆုတောင်းလျက် နေကြ ၏။
In less than two months, it has spread all over China and near 50 other countries globally at the time of this writing.
နှစ်လမပြည့်မီအချိန်အတွင်း ဤစာကို ရေးသားနေသောအချိန်တွင် ၎င်းသည် တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းနှင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ အခြားနိုင်ငံပေါင်း 50 နီးပါးအထိ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
A Facebook page has also been set up for this cause, which at the time of writing has garnered 47,000 Likes.
ထိုလှုပ်ရှားမှုအတွက် ဖေ့(စ်)ဘွတ်(ခ်)စာမျက်နှာတစ်ခုကိုလည်း ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်၊
အကြောင်းမူကား၊ ငါ့ကိုယဇ်ပေါ်မှာ လောင်းရသော အချိန်ရှိပြီ။ စုတေ့ရသောအချိန် ရောက်လေပြီ။
ထိုနောက်မိန်းမသည် ပဋိသန္ဓေယူ၍ ဧလိရှဲ ချိန်းချက်သော အချိန်အရွယ်စေ့သောအခါ သားကို ဘွားမြင်လေ၏။
စာရာသည် ပဋိသန္ဓေစွဲယူ၍၊ ဘုရားသခင် အမိန့်တော်နှင့် ချိန်းချက်သောအချိန်၌၊ အာဗြဟံအသက် ကြီးသောအခါ၊ သူ့အားသားကို ဘွားလေ၏။
အကျွန်ုပ်ကို အိုသောအခါ ပယ်တော်မမူပါနှင့်။ အားလျော့သောအခါ စွန့်ပစ်တော်မမူပါနှင့်။
ဘေးရောက်ရာအချိန်ကာလနှင့် စစ်ပြိုင်၍ တိုက်ရာအချိန်ကာလဘို့၊ ငါသိုထားသော မိုဃ်းသီးဘဏ္ဍာ များကို မြင်ဘူးသလော။
We will pilotascheme for collecting convalescent serology from people with confirmed cases and who have had an acute virology sample at the time of their infection.
ပြင်းထန်သော ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သည့် လူနာများမှ နာလန်ထ သွေးရည်ကြည် စုဆောင်းခြင်း စီမံချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့က ကနဦးစမ်းသပ် လုပ်ဆောင်သွားမည်။
ထိုသို့သော အရာတို့သည် အချည်းနှီးသက် သက်ဖြစ်ကြ၏။ လှည့်စားသောအရာလည်း ဖြစ်ကြ၏။ စစ်ကြောခြင်းကို ခံရသည်ကာလ ကွယ်ပျောက်ကြ လိမ့်မည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ထာဝရဘုရားစီရင်တော်မူ၏။ ဘေးရောက်သည်ကာလ၌ သူတို့ခိုလှုံရာဖြစ်တော်မူ၏။
အာခတ်မင်းကြီးသည် ဆင်းရဲဒုက္ခခံရသော အခါ၊ ထာဝရဘုရားကို သာ၍ပြစ်မှား၏။
သင်တို့ ရွေးယူသော ဘုရားတို့ကို သွား၍ ဟစ်ကြော်ကြလော့။ အမှုရောက်သော ယခု ကာလ၌ သူတို့သည် ကယ်နှုတ်ကြစေဟု ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား မိန့်တော်မူ၏။
ထိုနောက်တာမာသည် သားဘွားချိန်ရောက် လျှင်၊ ဝမ်းထဲတွင် သားနှစ်ယောက်ရှိ၏။
မိန်းမများရေခပ်သော ညဦးယံအချိန်၌၊ မြို့ပြင် ရေတွင်းနားမှာ ကုလားအုပ်တို့ကို ဝပ်စေပြီးလျှင်၊
ထိုသို့သောအရာတို့သည် အချည်းနှီးသက်သက် ဖြစ်ကြ၏။ လှည့်စားသောအရာလည်းဖြစ်ကြ၏။ စစ်ကြောခြင်းကို ခံရသည်ကာလ၌ ကွယ်ပျောက်ကြ လိမ့်မည်။
It's the time of the year when high school students graduate and prepare to go to the university of their choice.
တနှစ်တာ၏ ယခုအချိန်သည် အထက်တန်း ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စာမေးပွဲအောင်ပြီး ၄င်းတို့ ရွေးချယ်သော တက္ကသိုလ်သို့ သွားကြသော အချိန်ဖြစ်သည်။
addi (イタリア語>英語)selskabsskat (ポーランド語>スペイン語)předkládací (チェコ語>ドイツ語)ami tomar jonno opek (英語>ベンガル語)mortumrex pax domini (ラテン語>ポルトガル語)parupo i (英語>タガログ語)safe shores (英語>ラテン語)tibi gratiam agimus (ラテン語>イタリア語)detruita (エスペラント語>トルコ語)palacio de miramar (スペイン語>ドイツ語)işlemsel (トルコ語>スロバキア語)minimisation (英語>ブルガリア語)αμηχανιας (ギリシア語>ロシア語)nunc et in hora mortis nostrae (ラテン語>フランス語)humingi ng tawad sa presyo (タガログ語>英語)eget panem (ラテン語>イタリア語)generatoraggregaten (オランダ語>ギリシア語)iska matlab kya hai (ヒンズー語>英語)discovery (英語>フィンランド語)siete qui per lavoro? (イタリア語>英語)organizer (タガログ語>英語)mangabey (英語>ポルトガル語)pretesa creditoria (イタリア語>ドイツ語)胆汁うっ滞 (日本語>ロシア語)कहा ह (英語>ヒンズー語)